Faa'iidooyinka ay u leedahay dabeecadda duufaannada keena | Saadaasha Shabakadda
Maaddaama aan noqon doonno dad, iyo bulshadeenna, waa in la yiraahdaa faa'iidooyin badan kuma heli karno duufaan. Intaas waxaa sii dheer, waa arrin aad xasaasi u ah, gaar ahaan kuwa ay waxyeelada ka soo gaadhay. Laakiin, adoo diiradda saaraya meeraheenna, marka laga eego dhinaca saadaasha hawada, taas oo ah mowduuca aan halkan ku wajaheyno, ma aha wax aad u xun.
Waa suurtagal in mudnaan, aan sii wadno aqoonsiga duufaanno wata halaag. Dhirtii dhacday, xeebtii burbursanayd, xayawaankii dhibku ka soo gaadhay, iwm. Ma aha in la xuso waxa bulshada ka walwalsan. Khasaaraha dadka, dhismayaasha burburay, dabka koronto la'aan darteed, belaayo ... Haddana, marka laga eego dhinaca saadaasha hawada, waa wax togan. Ma filan kartaa sababta ka hor intaadan akhrin?
1 Nidaaminta heerkulka
3 Faa'iidooyin badan
Tallaabooyinka duufaannada waxay gacan ka geystaan ​​qaboojinta meeraha. Qodob muhiim ah waa in lagu xisaabtamo. Markasta oo ay kululaadaan biyaha ku jira badaha, ayay duufaannada aadka u daran u muuqdaan inay noqdaan. Duufaanta weyn ee Irma waxay ahayd muujinta dhammaan heerkulka sare ee aan la kulanno xilliyadii ugu dambeeyay. Dhanka kale, duufaannada, oo wata muggooda iyo baaxaddooda, waxay u muuqdaan inay qaboobaan, mana aha oo keliya heer maxalli ah, laakiin tani waxay u tarjumaysaa adduunka oo dhan. Waa mid ka mid ah siyaabaha ay meeraheennu u leeyihiin farsamo ay iskood isugu xakameyso heer kulkeeda.
In kasta oo samayska duufaannada ay tahay wax wali la darsayo, haddana waxyaabo yar ayaa laga ogyahay iyaga. Iyadoo lagu xisaabtamayo in heerkulka biyuhu saameyn ku leeyahay, waxay sidoo kale tarjumaysaa hawada kulul. Heerkulka oo sareeya, ayaa cufnaanta hawadu tahay, taas oo keenta inay kor u kacdo. Haddii aad sidaas sameyso waxay yareysaa cadaadiska, keenaya deganaansho la’aan, keenaya bilow, duufaan kiiskan. Taas bedelkeed, waxay noqon laheyd anticyclone. Hawo qabow iyo diirimaad iskuma darsamaan, waa taas sababta ay u dhaliso xilligan, oo markaa intaa ka sii badan dhacdooyinkan waxay ku dhacaan dhulbaraha. Iyada oo hawada diirran ee uu la kulmayo qabowga ka imanaya tiirarka.
Colaadaha waxay ka faa'iideystaan ​​duufaannada. Ka sakow noqoshada noocyada badda, meeraha ayaa u oggolaanaya malaayiin nooc inay noolaadaan. Waxay sidoo kale abuuraan jimicsi noocyo kale ah. Tusaale ahaan, mid ka mid ah waa algae, oo "kaalmaysi wadaag" uu dhashay 210 milyan oo sano ka hor.
Dhibaatooyinka ka dhasha dhuxusha la xidhiidha isbeddelka cimilada, sida dhalaalka ulaha, heerkulka oo kordha, iwm. Heerkulka sarreeya, meerayaashu waxay u muuqdaan inay culeys qabaan, taas oo ah, waxay u rogaan midab cad. Midab beddelidani waxay dhacdaa maxaa yeelay shuruudaha lagama maarmaanka u ah in lagu ilaaliyo zooxanthealle lama hayo, meerahana way eridaa Zooxanthealle waa borotokano isku mid ah.
Ugu dambeyntiina, haddii xaaladuhu sii xumaadaan, waxaad gaari kartaa heerka dhimashada meeraha. Markay taasi dhacdo, waxa dhab ahaan dhacaya waa taas nidaamka deegaanka oo dhan wuu baaba'aa, weligiisna lama soo ceshan karo. Taasi waa sababta, marinka duufaanka, hoos u dhigo heerkulka, iyada oo mar labaad nidaamineysa xaaladaha ay ku noolaanayaan. Tani waa sida ay duufaanku ugu ciyaaraan doorka "soo nooleynta" biyaha hoostooda, iyagoo gacan ka geysanaya sidii loo ilaalin lahaa dhammaan kala duwanaanshaha kaladuwanaanta weyn.
Kaliya maaha kuwa kor ku xusan, duufaanno sidoo kale gacan ka geysato cusboonaysiinta biyaha dhulka hoostiisa. Sidoo kale meelaha ay ku yaalliin biyaha fadhiya oo laga yaabo inay ahaayeen kuwa wax soo saara kaneecada waa la nadiifiyaa.
Astaamo kale oo gaar ah oo dabaylo xoog badani keensadaan ayaa ah in xididdada laga siibiyo dhirta Kuwa ugu liita waxay u muuqdaan inay jabaan, sidaas awgeedna kor u qaadaan keymaha waxaa lagu cusboonaysiin karaa iyadoo la ilaaliyo geedaha ugu adag. Sida biyaha fadhiya, waxay sidoo kale u adeegtaa xakameyn si looga fogaado in ay buuxsamaan noocyada cayayaanka qaarkood.
Waa wax la yaab leh sida mararka qaarkood, waxa u muuqda in aan la xakamaynin dabeecadda, ay leedahay sababo jiritaankeeda oo ay uga tagto dhaxal isu dheellitiran. Haddii aysan ahayn duufaannada, wax ka dhici lahaa dhulbaraha ayaa ah inay kululaan lahayd ilaa heer aad u sarreeya. Halkaas ayaan ugu dambayntii ka heli lahayn a sarreysa, hypercan, oo aan beryahan ka hadalnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Faa'iidooyinka dabiiciga ee duufaannadu keensadaan